६ जिल्ला चोर्ने, ६ जिल्ला दिने
मधेस बाट तीन अलग अलग ठाउँ गरी ६ जिल्ला चोर्ने अनि एक ठाउँ मा पहाड़ बाट ६ जिल्ला थप्दिने। यो अवैज्ञानिक भएन? फेरि राम चन्द्र को प्रदेश लाई भारत जाने बाटो चाहियो भनेर नवलपरासी टुकड़ा पारेको त्यो संघीयता नबुझेको प्रमाण हो। राम चन्द्र प्रदेश को मान्छे मधेस को बाटो भारत किन जान सक्दैनन्?
यो नक्शा बड़ो haphazard किसिमले आएको छ। संघीयता कुनै हालतमा दिनु हुन्न भन्ने हरुले ६ अंचल को खाका कोरेका छन। यो संघीयता होइन। यो प्रशासनिक ईकाई हरुको निर्माण हो।
Constituent assembly constitution federalism madhesi Nepal Terai